ပရိသတျတှကေိုခပြွတော့မယျ့ နနျးသူဇာနဲ့ကြျောထှဋျဆှတေို့ရဲ့ လမျးခှဲအကွောငျး - Cele Gabar
အခုရကျပိုငျးမှာပရိသတျတှခေဈြရတဲ့ အနုပညာရှငျစုံတှဲတဈတှဲဖွဈတဲ့ ကြျောထှဋျဆှနေဲ့နနျးသူဇာတို့ကတော့ လမျးခှဲလိုကျတယျဆိုတဲ့ သတငျးထှကျပျေါခဲ့ပွီးပရိသတျတှကေို ဝမျးနညျးစခေဲ့ပါတယျ။သူတို့နှဈဦးဟာ (၉)နှဈကြျောကွာ ရညျးစားသကျတမျးရှိပွီး ပရိသတျတှစေံထားရတဲ့အတှဲတဈတှဲဖွဈပါတယျ။ကြျောထှဋျဆှကေတော့ သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာ “လမျးခှဲလိုကျပါပွီ။သှေးအေးတဲ့နကေ့ရြှငျးပွပါမယျ။အခုတော့ ဒီလောကျပါပဲ” လို့ရေးထားတာပါ။
ဒီသတငျးဟာမနကေ့ အှနျလိုငျးမှာအတျောလေးပြံ့နှံ့သှားပွီး ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး အမြိုးမြိုးထငျမွငျခကျြပေးနကွေတာပါ။အခုတော့ လမျးခှဲတဲ့အကွောငျးကိုတိတိကကြပြွောပွလိုကျပါပွီ။အဲ့ဒါကတော့ “!!!Surprise!!! မနကျဖွနျ Valentine’s Day အတှကျ Music Video အသဈထှကျပါမယျ” လို့ နှဈယောကျလုံးရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာ တငျထားပါတယျ။အမှနျတကယျလမျးခှဲခဲ့တယျလို့ထငျပွီးတော့ စိတျပူခဲ့တဲ့ပရိသတျတှကေတော့ စိတျဆိုးနကွေတာပါ။ကြျောထှဋျဆှတေို့ခဈြသူနှဈဦးကတော့ စိတျမဆိုးကွဖို့ပွောနကွေပါတယျ။
ပရိသတျတှသေိခငျြခဲ့တဲ့ လမျးခှဲတဲ့အကွောငျးကတော့ ဒီနတေိ့တိကကြသြိရပါပွီ။တကယျတော့လမျးခှဲဆိုတာ သူတို့နှဈဦးရဲ့သမီးရညျးစားဆကျဆံရေးပွတျတောကျသှားတာမဟုတျဘဲ သီခငျြးအသဈရဲ့နာမညျပါတဲ့နျော…
Source : KyawHtutSwe,NannThuzar
ပရိသတ်တွေကိုချပြတော့မယ့် နန်းသူဇာနဲ့ကျော်ထွဋ်ဆွေတို့ရဲ့ လမ်းခွဲအကြောင်း
အခုရက်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့နန်းသူဇာတို့ကတော့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကို ၀မ်းနည်းစေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာ (၉)နှစ်ကျော်ကြာ ရည်းစားသက်တမ်းရှိပြီး ပရိသတ်တွေစံထားရတဲ့အတွဲတစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ထွဋ်ဆွေကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီ။သွေးအေးတဲ့နေ့ကျရှင်းပြပါမယ်။အခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ” လို့ရေးထားတာပါ။
ဒီသတင်းဟာမနေ့က အွန်လိုင်းမှာအတော်လေးပျံ့နှံ့သွားပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးနေကြတာပါ။အခုတော့ လမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျပြောပြလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့ “!!!Surprise!!! မနက်ဖြန် Valentine’s Day အတွက် Music Video အသစ်ထွက်ပါမယ်” လို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ တင်ထားပါတယ်။အမှန်တကယ်လမ်းခွဲခဲ့တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ စိတ်ပူခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ စိတ်ဆိုးနေကြတာပါ။ကျော်ထွဋ်ဆွေတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ စိတ်မဆိုးကြဖို့ပြောနေကြပါတယ်။
ပရိသတ်တွေသိချင်ခဲ့တဲ့ လမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းကတော့ ဒီနေ့တိတိကျကျသိရပါပြီ။တကယ်တော့လမ်းခွဲဆိုတာ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲ သီချင်းအသစ်ရဲ့နာမည်ပါတဲ့နော်…